घर यूरोपियन फुटबल स्टोरीहरू बेल्जियम फुटबल खेलाडीहरू Leandro Trossard बचपन कहानी प्लस अनटोल्ड बायोग्राफी तथ्यहरू
हाम्रो लियान्ड्रो ट्रसार्ड बायोग्राफीले तपाईंलाई उनको बाल्यावस्थाको कहानी, प्रारम्भिक जीवन, अभिभावक, परिवार, पत्नी (लौरा हिलभन), कार, जीवनशैली, व्यक्तिगत जीवन र नेट वर्थका बारे तथ्यहरू बताउँदछ।
संक्षेपमा, हामी तपाईंलाई एको सहि इतिहास दिन्छौं बेल्जियमका फुटबलर सामान्य मूल को। हाम्रो कथा उसको शुरुको दिनदेखि सुरु हुन्छ जब उसले फुटबलमा सफलता हासिल गर्‍यो। अब Leandro Trossard को बायो को आकर्षक प्रकृति मा तपाइँको आत्मकथा भूख whet गर्न, वयस्क ग्यालरी को लागी उनको बाल्यकाल हेर्नुहोस्।
लियान्ड्रो ट्रसार्डको जीवनी - आफ्नो शुरुआती दिनहरूदेखि जब उहाँ सफल हुनुभयो।
हो, सबैलाई थाहा छ कि उनीसँग काउन्टर आक्रमणको खतरा छ र जस्तै बहुमूल्यतामाथि हमला गर्ने ईडन हजर्ड। अधिक, उहाँ को लागी एक सबैभन्दा आकर्षक सम्पत्ति हो ब्राइटन। यी प्रशंसकहरूको बाबजुद, केहि प्रशंसकहरूले लेआन्ड्रो ट्रोसार्डको जीवन कहानीको एक संक्षिप्त संस्करण पढेका छन्। थप विज्ञापन बिना, सुरु गरौं।
Leandro Trossard बचपन कहानी:
जीवनी शुरुवातकर्ताहरूको लागि, उसले उप-नाम लिन्छ ट्रस। लियान्ड्रो ट्रोसार्डको जन्म डिसेम्बर १41994 of को day दिनमा बेल्जियमको गेन्क नगरपालिकामा उनकी आमा लिन्डा शेपर्स र बुबा, पीटर ट्रोसर्डको जन्म भएको थियो।
खोजीमा आधारित, बेल्जियम फुटबलर आफ्ना आमा बुबाको बीच मिलनबाट जन्मेका दुई बच्चाहरूमध्ये पहिलो बच्चा हो। हामीलाई कुनै प्रमाणको आवश्यकता पर्दैन ... लियान्ड्रोले उनका बुवा, पीटर ट्रोसर्डसँग सामन देखाए। यो कुरा पनि ध्यान दिनुहोस्, फुटबलरको आमा, लिन्डा शेपर्स, पत्रुससँग गाँठो बाँधेर आफ्नो परिवारको नाम राख्छिन्।
लिआन्ड्रो ट्रोसार्डका अभिभावकहरू भेट्नुहोस् - लिन्डा शेपर्स र पिटर ट्रोसार्ड।
सानो छँदा, लियान्ड्रो यस प्रकारको अति सक्रिय बच्चा थियो, जो सधैं फुटबल बलमा व्यस्त रहन्छ। जसै उसको इन्स्टाग्राम खाताले यसलाई राख्छ, बेल्जियम उसको कान्छी बहिनीको साथ बेल्जियमको सानो शहर लank्कालारमा हुर्के। तल चित्रित, दुबै भाई बहिनी जो एकैसाथ देखिन्छन्, उनीहरूको बाल्यावस्थाको मनमोहक सम्झनाहरू थिए।
Leandro Trossard बहिनी। दुबै भाइबहिनीको बाल्यकालको राम्रो सम्झना छ।
विger्गरले आफ्नो बाल्यकालका वर्षहरू डिल्सेन-स्टोक्केम बेल्जियम नगरपालिकाको वरिपरि बिताए जुन ल्युमिनस अरेनाबाट १ Just मिनेट जति दूरीमा छ र हामीसँग जेन्कको बहुउद्देश्यीय स्टेडियम छ। यो क्षेत्र मासलैंड जेन्क शहरमा छैन।
Leandro Trossard परिवार पृष्ठभूमि:
उनकी आमा, लिन्डा शेपरले बेल्जियमको लank्कलारमा एउटा सानो क्याफे सञ्चालन गर्‍यो। उनले आफ्ना ग्राहकहरुका लागि हल्का खाना र पेय पदार्थहरू बेचे, जो अधिकतर लियान्ड्रोको प्रशंसक हुन्। उनको श्रीमान् पीटर ट्रोसार्ड बेल्जियमका मजदुर वर्गका सदस्य थिए। सँगै, दुबै लियान्ड्रो ट्रसार्डका आमाबुवाहरूले मध्यमवर्गीय घर सञ्चालन गरे, राम्रो वित्तीय शिक्षा पाएका थिए र कहिले पनि पैसाको साथ सled्घर्ष गरेनन्।
Leandro Trossard परिवार मूल:
बेल्जियमका फुटबलर लankकलारका स्थानीय हुन्, शहर र नगरपालिका हस्सेटल्टको नजिकै लिम्बर्गको बेल्जियम प्रान्तमा अवस्थित छन्। तल चित्रित, यो एक शान्त शहर हो जुन परिश्रमी नागरिकहरू दक्षिणी नेदरल्याण्डको सीमा छेउमा अवस्थित छ।
Leandro Trossard को परिवार मूल। उहाँ बेल्जियमको शान्तिमय शहरबाट आउनुहुन्छ।
जातीय दृष्टिकोणबाट, लियान्ड्रो ट्रोसार्ड फ्लान्डर्स बेल्जियमको जातीय हो। यस भाषा समूहका यी मानिसहरू बेल्जियमको फ्लेमिश क्षेत्रमा छन्। तिनीहरू फ्रेन्च भन्दा डच भाषा बोल्छन्। ताराहरू जस्तै Thorgan Hazard बेल्जियमको फ्रान्सेली भाषी भागका असिना।
लियान्ड्रो ट्रसार्ड शिक्षा:
लank्कालारका धेरै बच्चाहरू जस्तै, फुटबल प्रेम गर्ने छोरा आफ्नो देशको अनुमति अनुसार अनिवार्य स्कूलको शिक्षा पालन गरे। केहि बिन्दुमा, लियान्ड्रोले आफ्नो माध्यमिक पढाईको पढाइलाई बेवास्ता गरे। अनुसन्धानमा यो छ कि फुटबल खेलाडी बेल्जियमको ब्रसेल्स शहरको माध्यमिक विद्यालय सिन्ट-जन बर्चमानस्कोलगे गए।
एक hyperactive बच्चाको रूपमा, फुटबलको लागि उसको प्रेमले उनलाई एक लतमा रूपान्तरण गर्‍यो जो सधैँ प्रत्यक्ष फुटबल खेलहरू हेर्नको लागि उत्सुक थियो। त्यस कारणले गर्दा, पत्रुस र लिन्डाले उनलाई जता जता पनि लैजान्छन् उनीहरूको पहुँच भित्र फुटबल खेलहरू हेर्न।
जब उनले लank्कालारको क्रेकल्ट्रीज क्षेत्रमा फुटबल खेल्थे, लियान्ड्रो र उनका साथीहरूले सम्झौता गरेका थिए। तिनीहरू कडा लडाई गर्न सहमत भए, तिनीहरूलाई प्रतिज्ञा गरे कि तिनीहरू मध्ये कम्तिमा पनि एक यो बनाउनु पर्छ। गिरोहको बीचमा, लिआन्ड्रो - सबैभन्दा सानो - अधिक महत्वाकांक्षी थियो। ऊ हुर्केको सडकमा अरू भन्दा बढी - उसले आफ्नो दक्षताहरू बिध्याउन धेरै घण्टा बितायो।
उसको परिवार Dilsen-Stokkem मा सरे पछि पनि, त्यो जवान एकै बाल्यकालको साथीहरु संग उनीसित एक सम्झौता थियो फुटबल खेल्न फिर्ता आउन जारी। समय मा गयो, सबै केटाहरु आफ्नो गन्तव्य सामना गर्न को लागी सारियो।
Leandro ट्रासार्ड फुटबल कहानी:
जे होस् बाल्यकालदेखि नै वास्तविक जेन्की, लेआन्ड्रो ट्रोसार्डको सबैभन्दा ठूलो सपना भनेको बेल्जियम क्लबसँग खेल्नु थियो। विकिपीडियामा उनको क्यारियर कहानी को बारे मा प्रकाशनहरु को विपरीत, यो जवान केआरसी Genk मा समाप्त भएको थिएन जब उहाँ सोह्र वर्षको थियो।
लियान्ड्रो ट्रोसार्डले आफ्नो क्यारियर केहि स्थानीय फुटबल टीमहरूको लागि खेलेर शुरू गर्नुभयो। आफ्नो क्यारियरको लात हिर्काउँदा, पीटर र लिन्डा (उनका आमाबुवा) उनलाई लुइस जे मर्सीरलान लगे, जहाँ प्यात्रोको युवा क्षेत्रहरू अवस्थित छन्। जब लियान्ड्रो बाह्र वर्षका थिए, उनी पेट्रोको साथ एक स्थायी खेलाडी भए (सानो बेल्जियम क्लब) जहाँ उनले केही राम्रो समयको अनुभव गरे।
पन्ध्र वर्षमा, ट्रोसार्ड बेल्जियमको लिम्बर्ग प्रान्तको नगरपालिका बोचोल्ट सहरको एउटा सानो क्लब एफसी बोचोल्टमा सरे। यस कदमको कारण पेट्रो समस्यामा परेको थियो किनकि उनीहरूले बेल्जियमको चौथाई डिभिजनमा पसीनामीकरण गरे।
बोचोल्ट लिआन्ड्रो ट्रोसार्डको युवा क्यारियरको एक चरण उच्च थियो। छिटो उठ्ने जवानले उत्तरी राइन-वेस्टफालिया क्लबका लागि स्ट्राइकरको रूपमा खेलाए। त्यस समयमा उनले अनुकरण गरे Didier Drogba उनको रोल मोडेलको रूपमा। आफ्ना बाबुआमा र परिवारका सदस्यहरूको खुशीको लागि, उनलाई बेल्जियमको राष्ट्रिय युवा पक्षमा बोलाइयो। उनले दुई सत्रमा क्लबको लागि goals२ गोल गरेपछि यो भयो।
Leandro Trossard जीवनी - फेम कहानी को मार्ग:
भर्खरै उसले जुनियर राष्ट्रिय कल प्राप्त गर्‍यो, बेल्जियम फुटबलको पहिलो डिभिजन टिमहरूले युद्धक फुटबलरमा चासो देखाए। KRC Genk र मानक Leandro का विकल्पहरू थिए, तर पहिलो पछि उनको लागि सबै भन्दा राम्रो विकल्प बन्यो।
युवा आक्रमणकारी सोलह मा KRC Genk मा समाप्त भयो। अनुभव नभएको उमेरमा धेरै कान्छी भएकोले, लियान्ड्रोलाई लिम्बर्गको लोमेल शहरमा रहेको अर्को क्लब लोमेल एसकेलाई loanण लिन भनियो।
ट्रोसार्ड बेल्जियमको पहिलो डिभिजन बी पक्षको साथ loanणमा प्रख्यात भयो। ऊ आफैंमा परीक्षण भयो (अझै loanणमा छ) अन्य टोलीहरूसँग, अर्थात्; KVC Westerlo र Oud-Heverlee Leuven संग। Edण प्राप्त खेलाडीको रूपमा goals 34 गोलको साथ, उदीयमान स्टारले आफ्नो अभिभावक क्लब (Genk) मा फिर्ता जान अधिकार प्राप्त गर्‍यो - यस पटक मान्यता प्राप्त हिटम्यानको रूपमा।
बेल्जियमले आफ्नो speण स्पेलको समयमा धेरै गोलहरू गर्‍यो।
Leandro Trossard बायो - सफलता कहानी:
यो प्रमाणित गर्दै छ कि उसको loanण मंत्रको सफलता द्रुत उदाउँदो ताराको लागि भाग्यको स्ट्रोक थिएन। उनले जेनकसँग द्रुत छाप पारे, क्लबको कप्तानसमेत बढे। उनीहरूको सब भन्दा महत्वपूर्ण खेलाडीका रूपमा, लियान्ड्रो ट्रसार्डले जेनकलाई बेल्जियमको लिग टेबलको शीर्षमा निर्देशित गरे - क्लबलाई धेरै महत्वपूर्ण क्षणहरू उत्पादन गर्न मद्दत गर्‍यो।
उसले एक नेताको सही चिन्ह प्रदर्शन गर्दछ।
त्यो समयमा, जहाँ उनले आफ्नो पाइला पछ्याउन थाले केविन डी ब्रुने, लियान्ड्रोलाई आफ्नो सीभीमा ट्राफियां जम्मा गर्नु बाहेक अरू केही थाहा थिएन। बेल्जियमको पहिलो डिभिजन लिगले जितेको नेताले मात्र उनको देशको उज्ज्वल सम्भाव्यताको रूपमा ख्याति कमायो।
जीत पछि, उनको बढ्दो प्रतिष्ठा यूरोप वरिपरि आकर्षणको केन्द्र भयो। धेरै प्रशंसकहरूको साथ, लियान्ड्रो ट्रसार्डसँग उच्च-गुणवत्ता विकल्पहरूको अभाव छैन। जून २०१ 26 को २th औं दिनमा ब्राइटनले उनलाई चार बर्षे सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न राजी भए। बाँकी, तिनीहरू भन्छन्, इतिहास हो।
लियान्ड्रो ट्रोसार्ड प्रेम जीवन लोरा हिलवेनसँग:
बेल्जियम फुटबलर एक तेजस्वी पत्नी छ, उहाँ भन्दा दुई वर्ष ठूलो। तर कसले ख्याल राख्छ!… उमेर केवल संख्या हो। दुबै प्रेमीहरूले अविवाहित सुन्दर दिनहरूको आनन्द उठाए, लियान्ड्रोले प्रश्न पोप गर्नु अघि - जुन उनले हो भनिन्!
लियान्ड्रो ट्रसार्ड- लउरा हिलवेनकी पत्नीलाई भेट्नुहोस्।
आफ्नो विवाह प्रस्ताव स्वीकार गरिसकेपछि, लौरा हिलवेनले उनको इन्स्टाग्राम प्रशंसकहरूलाई भने कि उनी लियान्ड्रो बाहेक अरू कसैसँग बस्न कल्पन गर्न सक्दिनन्। एक बर्ष पछि, ठूलो दिन अन्ततः दुई lovebirds को लागी आयो।
ठ्याक्कै ११ बिहान - ठुलो दिन, लौरा हिल्भन र उनका पतिले एक अर्काको विवाहको औंठी औंलामा राखे। उनीहरूको विवाहको स्थान ओप्लाब्बीक (ओडस्बर्गेन) को टाउन हलमा थियो, जहाँ ब्रन्कनको स्थानान्तरणलाई अन्तिम रूप दिनु अघि Genk दम्पती एक पटक थिए।
Leandro Trossard विवाह फोटो।
राम्रो योजना भएको अनुसार, लौरा हिलवेन र लियान्ड्रोको विवाह उनको पुरानो क्लब (KRC Genk) लाई अलविदा थियो, किनकि कप्तानले ब्राइटनमा सामेल हुन राजी भइसकेका थिए।
यो प्रासंगिक छ कि प्रेमी र प्रेमिका हुँदा, दुबै Leandro र लौरा आफ्नो जीवनको अर्थ दिन सहमत भए। उनीहरूले बच्चा जन्माउने सोच राखे उनीहरूसँगै बस्न। नौ महिना पछि (२०१ 2017 मा), थायागो ट्रोसार्ड - भविष्यका फुटबलर - जन्म भएको थियो। लियान्ड्रोका लागि बुबा हुनु कुनै श .्का बिना नै प्रेरणा, घमण्ड र उपलब्धीको सबैभन्दा ठूलो स्रोत भएको छ।
यस दिन, एक भविष्य फुटबलर - थायागो ट्रोसार्ड - जन्म भएको थियो।
लौरा र लियान्ड्रोलाई पक्कै पनि राम्रो बच्चा बुझेको सल्लाह लागू गर्न थाहा छ आफ्ना बच्चा (Thiago) को जीवनको सर्वश्रेष्ठ प्राप्त गर्नका लागि। मैले यो जीवनी लेख्दा, तीन व्यक्तिको परिवार इ England्ल्यान्डको दक्षिण तट - ब्राइटनको शहरमा खुशीसाथ जीवन बिताउँछन्।
इ England्ल्यान्डको दक्षिणमा सुखमय जीवन।
थाआगो ट्रसार्डको भविष्य के हो:
त्यहाँ एक उच्च मौका छ, केटाका बाबुआमाले उसलाई एक फुटबलर बन्न चाहान्छन्। तर सबैभन्दा पहिले, उसले पानी सुरक्षा र बचाव कौशल विकास गर्न आवश्यक छ। हामी थाआगो ट्रोसार्ड देख्न सक्छौं, जसले रग्बीलाई पनि मन पराउँछन्, आफ्नो खेलको भविष्यमा उनको पहिलो पाइला।
Thiago गरेको भविष्यमा पहिलो कदम चाल्छ।
Leandro Trossard व्यक्तिगत जीवन:
बेल्जियमका फुटबलरसँग धनु राशि राशि चिन्हको विशेषताहरू छन्। सुरूवात गरेर, हामी सबैलाई थाहा छ Leandro एक ऊर्जावान व्यक्तित्व को साथ हो। लank्क्लार मूलका आफ्ना विचारहरूलाई ठोस कार्यहरूमा रूपान्तरण गर्न सक्षम छन् जुन प्रायः जसमा तत्काल परिणामहरू उत्पादन गर्दछ।
हामीसँग विger्गरको धनु लक्षणहरूको स्पष्ट केस छ। के तपाईंलाई थाहा थियो? ... २०२० मा, लियान्ड्रो ट्रोसार्डले एक लेगो ताजमहल निर्माण गर्‍यो COVID-19 लकडाउनको बेला फुटबल एकाकीपनसँग व्यवहार गर्ने तरिकाको रूपमा। बेल्जियमले जेन्कमा रहेको आफ्नो परिवारको घरमा भने। उसले प्रत्येक दिन केही घण्टा व्यस्त राख्यो जुन कष्टकरै सबै,, 5,923 २। टुक्राहरू जम्मा गर्न विश्वको वास्तुशिल्प आश्चर्यकर्महरू मध्ये एक हो।
Leandro Trossard व्यक्तिगत जीवनको व्याख्या। एक लेगो ताजमहलको निर्माणले उसको धनु व्यक्तित्वको बनावटी देखाउँदछ।
अन्तमा, व्यक्तित्व छलफलमा, प्रत्येक सफल व्यक्तिको एक रहस्य तथ्य यो हो कि तिनीहरू कहाँबाट आउँदछन् बिर्सदैनन्। यो ब्राइटन विger्गरको मामला हो जुन अक्सर आफ्नो बाल्यकाल लंकालारको सडकहरूमा भ्रमण गर्दछ जहाँ उसले आफ्नो पहिलो फुटबल खेल्यो।
सामान्य फुटबलरले आफ्नो उत्पत्ति कहिल्यै बिर्सदैन।
Leandro Trossard जीवनशैली:
जहाँसम्म हामीलाई थाहा छ, फुटबलर समुद्र र गैर-समुद्री किनार बिदामा पैसा खर्च गर्न मन पराउँदछ। सरल शब्दमा भन्ने हो भने, लियान्ड्रोले धेरै जसो सेलिब्रिटी फुटबल खेलाडीहरूले जीवनको आनन्द लिन्छन्। छुट्टीको एक कारण उनको अहिलेको श्रीमती लौरा हिलवेनसँग सकरात्मक सम्बन्धको पोषण गर्नु हो।
समुद्र किनार ठाउँहरू र अन्य सुन्दर गन्तव्यहरूले लोरा र लियान्ड्रोको जीवनको लागि स्वस्थ प्रेरणाको खुराक थप गर्दछ।
लियान्ड्रो ट्रोसार्डको कार - बेल्जियमले के ड्राइभ गर्छ?
यो आधिकारिक हो, लank्कालार मूलले आफ्नो पैसा पैसा आफ्नो मनपर्ने कार जस्ता सम्पत्ति प्राप्त गर्न पनि खर्च गर्दछ। तल देखाईए जस्तै, लियान्ड्रोको कालो अटोमोबाइलको लागि विशेष समानता छ। ऊ विशेष गरी यो कारको प्रकारको मान्छे हो - एउटा ब्राण्ड जुन उसले किशोरावस्थादेखि नै चलाएको छ।
यहाँ Leandro Trossard को कार छ। बेल्जियम यस ब्रान्डप्रति वफादार रहेको छ।
Leandro Trossard पारिवारिक जीवन:
यदि कसैले तपाईंको तयारी चरणमा तपाईंको पक्षमा टाँस्यो वा जब तपाईं केही हुनुहुन्न भने, त्यसोभए तिनीहरू तपाईंको सफलताको बखत तपाईंसँग रहन योग्य छन्। यस खण्डमा, हामी लियान्ड्रो ट्रसार्डका आमा बुबा, भाइबहिनी र आफन्तहरू - जुन व्यक्तिले उसलाई उनको जन्मदिनमा धेरै माया गरेको महसुस गराउँदछौ।
लियान्ड्रो ट्रसार्डका बुबा:
पत्रुस आफ्नो छोराको जीवनमा परमेश्वरको हेरचाहको झल्काउँछन्। उहाँ बेल्जियमका खेलाडी एक जना पुरुष हुनुहुन्छ, जतिसुकै सफल वा अग्लो भए पनि। २०२१ मा जस्तो, सुपर ड्याड जीवनको स्वर्ण जयंती (2021० बर्षको उमेर) बाट एक वर्ष मात्र पछि छ।
पिटर ट्रोसार्ड आफ्नो छोरा जताततै लिएर जान्छन्। अहंकारी बुबा आफ्नो जीवनको सबै भन्दा राम्रो बाँचिरहेका छौं।
प्रारम्भमा, पीटर ट्रोसार्डले लिआन्ड्रोको क्यारियरलाई १००% ध्यान दिनको लागि आफ्नो जीवनलाई समेट्नुपर्ने आवश्यकता फेला पारे। दुबै बुबा र छोरा बाक्लो र पातलो भएर गएका छन् र दलालको सहयोगमा (जोसी कमेयरको व्यक्ति), उनको छोराको बढ्दो क्यारियर व्यवस्थापन गर्न सजिलो भएको छ।
लियान्ड्रो ट्रसार्डको आमा:
हामी लिन्डा शेपर्सलाई परिवारको मेरुदण्डको रूपमा हेर्दछौं। Dilsen-Stokkem (Lanklaar) नगरपालिका जहाँ Leandro हुर्कायो, उनको आमा (एक धेरै प्रख्यात मूल) लाई कुनै परिचय चाहिन्छ। लियान्ड्रो ट्रोसार्डकी आमा लank्कालार छिमेकमा सबैभन्दा सफल पब व्यवसाय चलाउँछिन्।
उनको छोराको लोकप्रियताको कारण, उनी प्राय जसो फ्यान ग्राहकहरुबाट आउँछन् जसले उनको व्यवसायमा ब्राइटनको खेलहरू हेर्न रमाउँछन्। एम्बेडेड भिडियोमा देखिएझैं लिन्डा श्यापर्स कोही हुन् जो खेलको समयको समयमा पनि खेल पत्रकारलाई खुला हात दिन्छ। हेर, त्यस्तै एक पलहरू।
लियान्ड्रो ट्रसार्डका भाई बहिनीहरू:
यस्तो देखिन्छ कि, बेल्जियमको कुनै भाई छैन तर एक बहिनी जसलाई उनले एक पटक आफ्नो सामाजिक मिडिया प्रशंसकहरूलाई प्रकट गरे। २०१ 2013 मा लोन मार्फत लोमेल युनाइटेडमा उनको भाइको प्रस्थान पछि, हामीले ट्रसार्डको बहिनीको बारेमा केही सुनेनौं। Leandro को कान्छो भाईले कम्तिमा अहिलेको लागि निजी जीवन बिताउँछ।
लियान्ड्रो ट्रसार्डका आफन्तहरू:
ब्राइटन विger्गरको श्रीमती लौरा हिल्भनका आमाबुबासँग कडा सम्बन्ध छ। लियान्ड्रो ट्रसार्डको सासु (विशेष गरी) उनकी छोरीको पतिको ठूलो प्रशंसक देखिन्छ। Fabienne हिल्भेन शायद सायद KRC Genk खेलहरु र ट्रफी उत्सव समारोह याद गर्दछ। जब लियान्ड्रो र उनकी श्रीमती वरिपरि आउँछन्, हजुरआमाले आफ्ना नाति (थाआगो) सधैं उनको छेउमा हुन्छन् भन्ने कुरा सुनिश्चित गर्दछन्। लिंडा जस्तै फेबिएनले पनि अन्तर्वार्ता प्रदान गर्छन्।
सम्भावित आफन्तको बारेमा कुरा गर्दा, डाइलानो ट्रोसार्डको नाम अक्सर सोशल मिडियामा पप हुन्छ। यसले हामीलाई एउटा संकेत दिन्छ कि ऊ फुटबलरको सानो चचेरो भाई हुन सक्छ।
Leandro Trossard अनटोल्ड तथ्यहरू:
युद्दात्मक वि win्गरको जीवन इतिहासको यात्रा गरिसकेपछि, हामी तपाईंलाई आवश्यक छ कि तपाईंलाई उहाँको बारेमा अझ बढी सत्य बताउन। थप विज्ञापन बिना, अगाडि बढौं।
तथ्य # १ - लियान्ड्रो ट्रोसार्ड र गन:
एक राम्रो पिस्टल शूटर बन्न ब्राइटन स्टारसँग सामर्थ्य र क्षमता छ। यहाँ, हामी उहाँलाई आफ्नो काँधको मांसपेशीहरू फ्ल्यास गर्दैछौं जुन हामीलाई उसको एक गोप्य शौकको रूपमा थाहा छ।
लियान्ड्रो ट्रसार्डको लुकेको शौक - शुटि shootingको लागि प्रेम।
तथ्य # १ - रक्सीले मात गर्दै:
लियान्ड्रोले एक पटक आफूलाई नकरात्मक रूपमा याद गराए। यो एक रात उनले मादक पदार्थ पाए। Genk कप्तान एक शीर्षक को एक उत्सव को दौरान केहि नराम्रो कुरा भने। तलको भिडियोमा, एक मतवाला ट्रोसार्डले "सबै किसानहरू समलि are्गीहरू" छन् भन्दै अपमान गरे। उनले क्लब ब्रुज (एक प्रतिद्वन्द्वी बेल्जियम विरोधी) को समर्थकहरूको सन्दर्भमा यो गरे।
पार्टी पछि, एक माफी माग्दै ट्रोसार्डले टिभी लिम्बर्ग क्यामेराको अगाडि घटनाको जवाफ दियो। उसको शब्दमा;
"त्यो रात, म बिरालो पियक्कड थिएँ। म यसका साथ मानिसहरूलाई चोट पुर्‍याउन चाहन्न। म दु: खी छु। "
तथ्य # १ - हाँस्दै ग्यास आरोप:
अर्को विवादमा विger्गर फुटबलले निषेध गरेको कुरा भिडियोमा देखा पर्‍यो। लियान्ड्रो जहानबख्शको साथ टेबुलमा बस्यो, डफी एट अल - या त पट्टि वा नाइटक्लबमा, पेय पदार्थले घेरिएको थियो र पाठ्यक्रम, शीशा पाइप। भिडियो (तल) मा देखीएको बेलुनहरू नाइट्रस अक्साइड, AKA हँसिदै ग्याँस सुहाउने मानिसहरू बीच लोकप्रिय छ।
स्थानीय अखबारका अनुसार आर्गस, ब्राइटनलाई भिडियोको बारेमा थाहा छ र यसैले आन्तरिक रूपमा यससँग व्यवहार गरेको छ।
तथ्य # १ - लियान्ड्रो ट्रसार्ड वेतन र नेट वर्थ:
ब्राइटन सालरी BREAK तल
प्रति वर्ष: £ 1,822,800
प्रति महिना: £ 151,900
प्रति हप्ता £ 35,000
प्रति दिन £ 5,000
प्रति घण्टा £ 208
प्रति मिनेट £ 3
तपाईंले Leandro Trossard हेर्न शुरू गर्नुभयोको बायो, उसले ब्राइटनसँग कमाएको छ।
बेल्जियमको औसत नागरिक जसले एक वर्ष € €१,61,357।। कमाउँछन् ब्राइटनसँग वार्षिक Le years वर्ष nine महिना काम गर्नुपर्नेछ र Le months महिना काम गर्नुपर्नेछ।
Leandro Trossard नेट वर्थ:
२०१२ देखि वरिष्ठ खेलाडी हुनुको मतलब उसले आफ्नो एजेन्ट - जेसी प्लेयर म्यानेजमेन्ट स्पोर्ट्स (जोसी कोमेरको स्वामित्वमा रहेको) अन्तर्गत फुटबलमा ठूलो भाग्य कमायो। ट्रोसार्डको तलब, सम्झौताहरू र प्रायः वर्षहरूमा प्राप्त प्रायोजकहरूले २०१२ को सुरु भएसम्म उसको नेट वर्थ स्काइरोकेट लगभग million मिलियन यूरोमा देखेको छ।
तथ्य # १ - वुडवर्क रेकर्ड:
के तपाईंलाई थाहा थियो?… Leandro Trossard पछि पहिलो फुटबलर हो क्रिस्टियानो रोनाल्डो एकल प्रीमियर लिग खेलमा काठको मुठ्ठीलाई times पटक रटल गर्न। त्यो गरेर, उनले एक संयुक्त EL खेल खेलेको संयुक्त अशुभ खेलाडी को रूप मा रेकर्ड छ।
तथ्य # १ - FIFA Stats:
बल्लरसँग कम्तिमा points० अंक हुनुपर्दछ किनभने २०२१ को सुरूमा हामीले उनलाई ड्राईबलि ball र बल कन्ट्रोलमा इपीएलको एक उत्कृष्ट देख्यौं। Leandro र Divock Origi F 2021 अ of्कको कम फिफा २०२१ स्कोर ग्रस्त छ, जुन धेरै प्रशंसकहरूको लागि निरपेक्ष ठट्टा हो।
Leandro मा पग्लिएको अन्याय हेर्नुहोस्।
तथ्य # १ - लियान्ड्रो ट्रसार्ड धर्म:
बेल्जियमको प्रमुख धर्म भनेको इसाईमत हो (विशेष गरी रोमन क्याथोलिक धर्ममा)। क्याथोलिकहरूले देशको population 58% जनसंख्या बनाउँछन्। लियान्ड्रो एक क्रिश्चियन हुन् जसले लउरा हिल्भेनसँग धर्मको अनुमतिले विवाह गरे। ऊ त्यस्तो प्रकार हो जसले आफ्नो अभ्यास सार्वजनिक गर्दैन।
तर धेरै विदेशी खेलाडीहरूले अनुभव गरेझैं टुक्रिनु भन्दा बेल्जियम अ strength्ग्रेजी प्रिमियर लिगमा बलबाट अर्को शक्तिमा गयो। लियान्ड्रो ट्रोसार्डको जीवनी हामीलाई सिकाउँछ कि - यो एक व्यक्तिको आकार हो जुन सफलतालाई निर्धारित गर्दछ। साथीहरू मध्ये जससँग उसले सम्झौता गरेका थियो (बाल्यकालमा), लियान्ड्रोको सबैभन्दा ठूलो इच्छा थियो।
फुटबलरका आमा बुबा (लिन्डा शेपर्स र पीटर ट्रोसार्ड) लाई उसको मेरुदण्ड भएकोमा प्रशंसा गर्न लाइफबागरलाई बेवाइज गर्दछ। याद गर्नुहोस्, उनका बुवाले उनको हेरचाहको लागि उनको जीवनको जीवनलाई पक्रन राखेका थिए र उनको आमाले उनको छोराको स्थानीय फ्यानबेस मनोरन्जन गर्न उनको पब प्रयोग गर्दछन्।
हाम्रो टोलीले लियान्ड्रो ट्रोसार्डको बायोमा लेख वितरण गर्दा निष्पक्षता र सटिकताको लागि प्रयासरत थियो। कृपया हामीसँग सम्पर्क राख्नुहोस् यदि तपाइँले वि of्गरको बारेमा लेख्नको लागि सही जस्तो लाग्दैन भने। अन्यथा, हामीलाई टिप्पणी सेक्सन, Leandro मा तपाइँको विचारहरू थाहा दिनुहोस्। आफ्नो संस्मरणको एक द्रुत योग प्राप्त गर्न, यो विकी तालिका प्रयोग गर्नुहोस्।
पुरा नाम: Leandro Trossard
उपनाम: ले ट्रोस
जन्म मिति: डिसेम्बर १41994 XNUMX को १th औं दिन।
अभिभावक: पिटर ट्रोसार्ड (फादर) र लिन्डा शेपर्स (आमा)
पत्नी: लौरा हिलवेन
बच्चाहरु: Thiago Trossard।
आफन्तहरू: फेबिएन हिलवेन (मदर इन्लाव र थाआगोको हजुरआमा) र डिलानो ट्रोसार्ड।
आमाको पेशा: पब मालिक
बुबाको पेशा: जोसी Comhair साथ पार्टनर ब्रोकर।
ब्राइटन ज्याला: £ १,1,822,800२२,35,000०० (वार्षिक) र £ ,XNUMX£,००० (साप्ताहिक)
खेल्ने स्थिति: विger्गर र मिडफील्ड
उचाइ: १.1.72 मीटर वा १172२ सेमी वा feet फिट inches इन्च।
एजेन्ट: JC Playmanagement-sports (जोसी Comhair द्वारा स्वामित्व गरिएको)